Kolanyo Kenyaati Ah Oo Qarax Lagula Beegsaday Jubba Hoose. – Bogga Calamada.com
Kolanyo Kenyaati Ah Oo Qarax Lagula Beegsaday Jubba Hoose.
January 30, 2018 3:54 pm Views: 61
Wararka laga helayo gobalka Jubbada hoose waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah gobalkaasi qarax culus lagula beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Saliibiyiinta Kenya oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobalkaasi.
Kolanyada Kenyaatiga ee qaraxa lala beegsaday waxey ku socdaalayeen wadada isku xirta degmada Dhoobley iyo deegaanka Husingow oo ka wada tirsan gobalka Jubbada hoose oo ka mid ah gobalada duulaanka ay ku joogaan ciidamada Kenya.
Qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso ee Rimuudka laga hago waxaa dhawaaqiisa si aad ah looga maqlay deegaanada ku dhaw dhaw goobta qaraxa lagula beegsaday Kenyaatiga waxeyna wararka la helayo sheegayaan in qaraxa uu sababay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay askarta Kenya.
Kolanyada qarxan lala beegsaday ayaa kasoo baxay degmada Dhoobley waxeyna sahay u wadaan ciidamada Saliiyibiinta Kenya ee ku go’doonsan deegaanka Husingow ee isla gobalka Jubbada hoose.